Fitondrana HVM : mitohy ny fanonganam-panjakana anaty fanjakana | NewsMada
Fitondrana HVM : mitohy ny fanonganam-panjakana anaty fanjakana
Tarazo ratsy tamin’ny Tetezamita? Na noho ny maha olom-pahefana fotsiny fa tsy olom-panjakana… Tsy manao afa-tsy izay hahamafy orina ny fahefana hoe marin-toerana sy izay hahatsara endrika ivelany hoe tena miasa ho an’ny vahoaka. Fanonganam-panjakana no nitranga raha vao nijoro izao fitondrana izao.
Niharan’izay fanonganam-panjakana anaty fanjakana izay voalohany ny filohan’ny Antenimierampirenena voalohany, Razanamahasoa Christine, izay natolotry ny vondrona politika Mapar. Naongana izy fa hoe tsy manankery ny fitsipika anatiny tamin’ny fifidianana, ny 18 janoary 2014, fa tsy nankatoavin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) na araka ny lalàmpanorenana na tsia.
Mandeha hatrany ny resabe alohan’ny fanonganana
Niteraka resabe ihany koa ny amin’ny fialana na fanalana ny Praiminisitra Kolo Roger, ambaran’ny mpandinika sasany fa mbola karazana fanonganam-panjakana ihany. Natosiky ny antoko hametra-pialana izy, fa tsy nety niala. Voatendry ho Praiminisitra ny jeneraly Ravelonarivo Jean, ny 12 janoary 2015, vao nazava ny raharaha.
“Averiko fa mbola tsy nametra-pialana aho, ary tsy hametra-pialana”, hoy kosa ny Praiminisitra Ravelonarivo Jean, ny 6 avrily 2016, momba ny resabe ny amin’ny fialany. Nefa ny afakampitso, ny 8 avrily 2016, nambaran’ny eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika fa ekena ny fametraham-pialany. Tsy ara-dalàna fa fanonganam-panjakana?
Tsy mifankaiza amin’izany ny fanaovana amboletra ny fanalana ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré, ny 31 oktobra 2017 lasa teo. Nilaza izy fa tsy nametra-pialana sady tsy nesorina araka ny fombafomba sy ny lalàna: nanaovana fanonganam-panjakana izany.
Mibahan-toerana ny kajikajy sy paipaika… tsy hanarahan-dalàna
Saika tsy mijery lavitra izay vokatry ny fanapahan-keviny sy ny ataony ny mpitondra, tsy mahita afa-tsy ny eo no ho eo ihany. Hany ka mora mivadika amin’ny kajikajy sy paipaika politika. Izay ny maha olom-pahefana fa tsy olom-panjakana azy? Izay hahamafy orina sy hanohizana ny fahefana hatrany no mahamaika.
Zava-doza amin’izany hambom-po diso toerana izany ny tsy fanarahan-dalàna, ny tsy fanajana ny teny nomena, ny tsy firaharahana ny hafa. Very amin’izany ny hoe fampandrosoana sy ny fiainam-bahoaka… Hanao ahoana amin’ny fifidianana fa ny matahotra fanonganam-panjakana no tena mpanao fanonganam-panjakana?